Wararka Maanta: Khamiis, Jan 13, 2022-Xukuumada Somaliland oo ku dhawaaqday qayladhaan abaareed
Madaxweyne ku xigeenka oo u hadlayay guddi uu madaxweyne Biixi u magacaabay gurmadka abaaraha, ayaa sheegay in abaaro ba'ani ay ku dhufteen deegaano kamid ah Somaliland.
"Waxaanu maanta halkan usoo joogsanay hadii aanu nahay guddidii gurmadka abaaraha in aanu ku dhawaaqno in abaartii meel adag marayso, kadib markii roobkii gugu uu teel teel ku ahaa qaybo kamid ah dalka" ayuu yidhi Saylici.
Saylici ayaa sheegay in abaartu saamaysay dad hal-milyan ku dhaw oo ku kala nool lix gobol oo Somaliland ah.
"Waxa dalka ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dhamaan gobolada dalka, sida Sool, Sanaag, Togdheer, Saaxil, Howdka Maroodijeex iyo Xeebta Gobolka Awdal, qiimaynta lagu sameeyay abaarta, waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya, 810,000 (sideed boqol iyo toban kun)" ayuu yidhi Saylici.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in Hay'adda Maaraynta Aafooyinka Somaliland, diyaarisay raashin la gaadhsiiyo dadka abaaruhu saameeyeen, isla markaana xukuumadu diyaaraysay lacag dhan 3 milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo abaarta